ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ – Live the Dream
အခုအချိန်မှာ အခြေအနေတွေက အလုပ်ပိတ်၊ ရုံးပိတ်၊ ကျောင်းပိတ်နဲ့ ပိတ်ရက်တွေ ရနေပေမယ့် အပြင်ထွက်ကဲဖို့ကျ အခွင့်အရေးမရတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်တွင်းပုန်းရင်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလမ်းပျောက်နေကြမှာပေါ့.. နေမထိထိုင်မထိတွေဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်လျှောက်လည်ဖို့ကလည်း အခွင့်ကမသာ…တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲ ဘာမှန်းမသိအချိန်ကုန်နေတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ ပိတ်ရက်ရှည်က အဓိပ္ပါယ်မရှိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်… တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးက ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ. (တစ်လွဲမတွေးပါနဲ့ဦးနော်)..ကဲဘာတွေများအမြတ်ထွက်မှာတုန်း ကြည့်လိုက်စို့
၁. Version မြှင့်လိုက်ပါ
တစ်ချို့က အလုပ်ကိစ္စ၊ တစ်ချို့ကကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ တစ်ချိန်က အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မဖမ်းဆုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်တွေကိုယ်စီရှိကြမှာပါ။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိပေမယ့် အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့. ဥပမာအားဖြင့် အာရုံစိုက်ဖို့အချိန်မလောက်ခဲ့တဲ့ပညာရပ်လေ့လာမှုတွေ၊ လေ့လာချင်ပေမယ့် မလေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေ၊ မဖြည့်ဆည်းဖြစ်လိုက်တဲ့စကေးတွေ ချုံငုံပြောရရင် ကိုယ့်ကို နောက်တစ်ဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ မဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေ ကိုယ်စီရှိကြမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ဒါတွေကို အချိန်ပေးအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရနေတုန်း ကောင်းစွာအသုံချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခြေအနေတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီး ရုံးတွေပြန်ဖွင့်၊ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ ကိုယ့်အနေနဲ့ Skills အသစ်တွေနဲ့ Version မြှင့်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ရက်ကို ကောင်းစွာအသုံးချတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာမိနေမှာပါ။
မိသားစုနဲ့ရှိနေစဉ်တုန်းက အတူတူအချိန်ဖြုန်းဖို့မေ့နေခဲ့ပြီး အဝေးတစ်နေရာအလုပ်ခွင်ထဲဝင်သွားတော့မှ လွမ်းနေမိတာမျိုးတွေ လူတိုင်းဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ မွေးရပ်မြေပြန်ဖို့အခွင့်အရေးတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့အခွင့်အရေးက ကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ လက်ဆုံစားခဲ့တဲ့ ထမင်းဝိုင်းအိုလေး ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့၊ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ ညဘက်စကားလက်ဆုံကျတဲ့အခိုက်အတန့်ပြန်ရဖို့ အခွင့်အရေးရတုန်းမှာ ဖုန်းတစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေလှပါဘူး။
နယ်ဝေးမှာ ကျောင်းတက်၊ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရတောင်ရခဲ့ အခွင့်အရေးမို့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု ဆွေးမျိုးတွေကို အချိန်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်. မင်မင်တို့ မိသားစုမှာဆို ဂီတာတီးသီချင်းဆိုကြတဲ့အလေ့အထလေးရှိတယ်.. အဲ့တာကိုလွမ်းနေတာလည်းကြာလှပေါ့. အခုတော့ မင်မင်လည်း အိမ်ပြန်ချိန်နီးလို့ ပျော်နေပြီလေ…တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစိတ်ချမှလည်း မိသားစုတွေနဲ့ပြန်ဆုံပါနော်..မဆုံနိုင်ရင်လည်း Video call လေးနဲ့ပဲပေါ့. အခုအချိန်မှာ အဓိကက ကိုယ့်အနေနဲ့ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူမဖြစ်ဖို့ပဲ.
တစ်ချိန်က ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုအားနည်းသမျှ အခုလို အားလပ်ရက်ရှည်မျိုးမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်တဲ့ပုံစံကို ပြင်ပြီး ကျန်းမာရေးဘက်ကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်ဖို့ပြောပါရစေ..။ Strong Mind ဖြစ်ဖို့က Strong Body ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်..ပြီးတော့ အခုလိုရောဂါထူပြောတဲ့ ခေတ်အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်နိုင်သမျှမြှင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အစာအဟာရပုံစံကို ပြုပြင်ကြည့်ပါ..အစာအဟာရပြည့်ဝတဲ့ Real Food တွေ၊ အသီးအရွက်တွေကို ပဲစားသုံးပါ။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း၊ အားကစားတွေကို အချိန်ပေးလုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပိုင်ဆိုင်လာနိုင်သလို အသက်ပိုမိုရှည်စေမယ့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပိတ်ရက်တွေမှာ ကျန်းမာရေးဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်ပြီး လိုက်နာတာမျိုး၊ Online ပေါ်က ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း Tutorial ကြည့်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ဂူအောင်းသိုင်းကျင့်တာမျိုးကို လုပ်သင့်ပါတယ်နော်.
ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်.. မစုံလင်မှုတွေကြောင့်.. အသုံးမကျမှုတွေကြောင့်.. စသည်ဖြင့်.အဖက်ဖက်က တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါ Mentally Strong ဖြစ်တယ်ဆိုဆို တစ်ခါခါတော့ စိတ်ဓါတ်တွေ အဝီစိအထိကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေက ကျဆင်းလွန်းနေလည်း အချိန်ပေးကုစားလို့မရတာနဲ့ အလုပ်ထဲမှာရော၊ တစ်ခြားနေရာတွေမှာရော တစ်ဖြည်းဖြည်းကိုယ်ရည်သွေး ကျဆင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကုစားဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေ ကို ပြန်ပြီးဖြည့်တင်းဖို့ကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ရက်ရှည်တွေမှာ ဘုရားတရားပိုလုပ်ဖြစ်တာမျိုး၊ စာအုပ်စာပေတွေများများဖတ်တာမျိုးနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ မင်မင်တို့ရဲ့ page မှာ လူငယ်တွေ ကြုံရတတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတဲ့ စာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဝင်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို အနုပညာကုထုံးတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာအောင်လုပ်တာမျိုး ဥပမာအားဖြင့် ပန်းချီဆွဲတာ၊ ဂီတတွေလေ့လာတာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ တွေကို ဒီလိုအားလပ်ရက်တွေမှာ လုပ်သင့်ပါတယ်။
အခုလို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်မှာနေခြင်းထက်ကောင်းတဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်း မရှိဘူးဆိုတာကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပွဲလမ်းသဘင်တေွခုထိလုပ်နေတာမျိုးတွေ၊ လူသူထူထပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေကို ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ မင်မင်ပြောခဲ့သလို ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့အရာတေွလုပ်နိုင်တာမို့ လိမ်လိမ်မာမာလေး တစ်ခေါက်လောက်နေလိုက်ပါဦးနော်..။ဒါက ကိုယ့်အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ချစ်ရတဲကိုယ့်မိသားစု, ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Stay Home , Stay Safe ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အိမ်မှာနေပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အသက်တွေကို ကာကွယ်ရင်း၊ အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ အားလပ်ရက်ရှည်ကို ဖြတ်သန်းကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကဲ မင်မင် ရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို အတင်းမတိုက်တွန်းချင်ပေမယ့် ဒီအထဲက အချက်တစ်ချက်လောက်ကို လုပ်နိုင်ရင်ပဲ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးများမယ်ဆိုတာကတော့ အာမခံပါတယ်… ပိတ်ရက်ရတဲ့သူများရော၊ မရသေးတဲ့သူများပါ.. ရလာမယ့် ပိတ်ရက်ရှည်လေးမှာ အားလုံးကျန်းမာပြီး အကျိုးရှိတဲ့ပိတ်ရက်ရှည်လေးဖြစ်ပါစေနော်…